Ikhaya Elinobungane nge-w/Patio - Amabhulokhi ama-2 ukuya eLake Lake!
Ingabe ufuna ukujabulela ukuphila okunethezeka kwechibi? Bhuka uhambo oluya 'ku-Mill Street Haven,' enamagumbi okulala angu-3, nezindlu zokugezela ezingu-2 eziqashisayo e-Green Lake. Kutholwe amabhulokhi angu-2 kuphela ukusuka emanzini futhi kuhlinzeka nge-WiFi yamahhala, ikhishi eliphambili, kanye nekhona elithokomele lokuzijabulisa nemidlalo, leli khaya elingu-1,260-square-foot kwabangu-6 lilungele imindeni. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ukuchitha izinsuku zakho uziphumulele kuvulandi elinefenisha, uchafaza eGreen Lake, noma ukushushuluza e-Cascade Mountain, uqinisekile ukuba nendawo ongasoze wayikhohlwa!
I-Master Bedroom: I-Queen Bed | Ikamelo lokulala 2: Imibhede Emi-2 Yamawele | Igumbi lokulala 3: I-Queen Bed
Leli khaya elihle lasekuqaleni kwawo-1900 lisanda kubuyekezwa futhi linokuhlobisa okusha, uhlelo lwaphansi oluvulekile, nazo zonke izinto ezilula zesimanje ozifunayo.
Ngemva kosuku lokuzidela kwangaphandle, vula indawo yomlilo kagesi bese uncibilika esofeni. Njengoba usakaza izinhlelo zakho eziyintandokazi namamuvi kusikrini esiyisicaba se-Smart TV, uzoba izinyathelo ezisuka ekhishini elihlonyiswe ngokugcwele.
Ikhaya le-Mill Street Cooking School (www.millstreethaven.com) akumangazi ukuthi ikhishi laleli khaya linezinkanyezi ezi-5. Ngezinto zikagesi zensimbi engagqwali, izinto zokubala zequartz, kanye nesiqhingi esikhulu, ikhishi linakho konke ozokudinga ukuze 'wow' abangani bakho ngamakhono akho okupheka.
Ufuna ukukhulisa ukudla kwakho? Lahla ngaphakathi endlini bese udla kuvulandi elingemuva elinefenisha. Amatafula evulandi yabangu-7 ayindawo ekahle yokujabulela ukudla okukhumbulekayo ngaphansi kwesibhakabhaka saseWisconsin.
Njengoba abancane bakho bezulazula bayolala emibhedeni yabo engamawele, hlehla ungene ekamelweni eliphambili futhi uvumele umbhede wendlovukazi ukwenze ulale. Kukhona nombhede olingana nendlovukazi phezulu futhi onendlu yokugezela egcwele.
Qiniseka ukuthi ujabulela konke lokho iGreen Lake engakunikeza ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngokuqaliswa kwesikebhe samahhala esiqhele ngamabhulokhi angu-2 kanye nolwandle oluqhelelene namabhulokhi angu-2 ngokuqhubekayo, iGreen Lake inikeza ukubhukuda, ukudoba, ukushushuluza emanzini ezikebheni, i-kayaking, ukugibela izigwedlo, nokuningi!
Zitholele endaweni ngesikhathi sasebusika? Ungakhathazeki, i-top-notch skiing itholakala endaweni ekude! Phakathi nehora lendawo, iCascade Mountain kanye neNordic Mountain Ski Area zinikela ngemithambeka embalwa yabashushuluzi nabashushuluza eqhweni bayo yonke iminyaka.
I-Town Square, etholakala endaweni eyidrayivu emfushane ukusuka kule ndawo, iyikhaya lamabhizinisi ahlukahlukene asukela ekwelapheni ngokusikhipha umzimba kuya kumaworkshop okupenda. Uzothola nezindawo zokudlela eziningi ezimnandi nezitolo zekhofi endaweni.
I-Evolve yenza kube lula ukuthola nokubhukha izakhiwo ongeke ufune ukuzishiya. Ungakhululeka ngokwazi ukuthi izindawo zethu zizohlala zikulungele nokuthi sizophendula ucingo 24/7.Okungcono nakakhulu, uma kukhona okuvaliwe mayelana nokuhlala kwakho, sizokulungisa. Ungathembela ezindlini zethu nakubantu bethu ukuthi bakwenze uzizwe wamukelekile--ngoba siyazi ukuthi iholide lisho ukuthini kuwe.
I-Evolve yenza kube lula ukuthola nokubhukha izakhiwo ongeke ufune ukuzishiya. Ungakhululeka ngokwazi ukuthi izindawo zethu zizohlala zikulungele nokuthi sizophendula ucingo 24/7.O…